मन्त्रालय बाँडफाँटबारे नेकपा एसमा असन्तुष्टी, गठबन्धनमा फेरी विवाद ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मन्त्रालय बाँडफाँटबारे नेकपा एसमा असन्तुष्टी, गठबन्धनमा फेरी विवाद !
नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गठबन्धनले गरेको मन्त्रालय बाँडफाँडबारे असन्तोष देखिएको छ ।
यसअघि भएको सहमतिमा पार्टीभित्रै असन्तुष्टी देखिएपछि मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डाका बारेमा गठबन्धनमै पुनः छलफल गर्न निष्कर्षमा नेकपा एस पुगेको हो । बैठकमा मन्त्री संख्या ५ र एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने कुरा उठेको विरोध खतिवडाले बताए ।
समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुंग्याउने अधिकार पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पाएका छन्।बिहीबार बसेको सो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यक्ष नेपाल शीर्ष बैठकका लागि प्रधानमन्त्री बालुवाटार गएका छन्।
‘अहिले बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुको बैठक छ। त्यसले मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउँछ। माधव नेपालले त्यहीँ नै हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम दिनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले अधिकार दिएका छौं,’ बैठकपछि विरोध खतिवडाले भने।
उनका अनुसार, बैठकमा मन्त्री बन्नेको नामको विषयमा छलफल भएन। उनले भने, ‘संख्या र मन्त्रालयको विषयमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने साथीहरुको भनाइ छ। सम्भव भयो भने फेरबदलपछि नाममा पनि केही तलमाथि हुनसक्छ। सामान्यतया आज उहाँले टुंग्याएर आउनुहुन्छ।